DEG DEG+ Waraysi Cumar Cabdirashiid oo Afka furtay Heshiiska Dalka Imaaraadka ee Berbera iyo Xaalada oo Cakiran Daawo – Marqaanmedia24.com
April 22, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 3
Ra’isul wasaarihii hore ee Somalia Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa markii ugu horeysay ka jawaab celiyay hadalkii dhawaan kasoo dowladda Imaaraadka Carabta ee ahaa in ay heshiiska ku saabsan dekedda Berbera ay galeen Xukuumaddihii hore ee soo maray Somalia.
Cumar Cabdirashiid waxa uu sheegay in haddalka kasoo yeedhay Imaaraadka uu yahay mid aan sal iyo baar laheyn, isla markaana aanu jirin Heshiis ay Imaaraadka kula galeen Dekadda Berbera iyo Saldhiga Militery ee magaalada Berbera.
Waxauu Cumar Cabdirashiid cadeeyay in Imaaraadka aysan kawada hadlin Heshiiska Dekadda ay sheegayaan inay kula Heshiiyeen Xukuumadii hore ee Soomaaliya.
HALKAN KA WARAYSIGA CUMAR C.RASHIID
Dalkani muwaaddiniintiisa dhabta ah ayaa ka qaalib noqon doona inta yar ee munaafaqadda ka dhex wadda. Soomaalidanu ma aha tii hore ee sahal lagu badowsan jiray inta been lagu maaweeliyo. Ma aha mid dib dambe qaddiyad qabiileysan maanka lagaga qaldi doono. Soomaalidani xadaaradda adduunyada ka shaqeysa ayay la jaanqaadday oo way ilbaxday. Danteeda cidi daah ka ma saari karto oo way dhaadday. Dalkeeda iyo qarannimadeeda na cid uga tarjumi kartaa ayaan ba jirin.
Siyaasi beenawaas ah iyo kaabbe qabiil dagaal ooge ah midna ma harowsan doono. Ummadi marka ay ilbaxdo waa daad soo rogmaday ee aan la is hor taagi karin. Kacdoonku waa sida uu u billawday oo kacaanku na waa hirkaa soo boodaya. Qarannimada macaankeeda iyo qadhaadhka ay la’aanteedu leedahay Soomaalidani soo wada dhadhamisay oo dhiiluhu way u kala summadeysan yihiin. Farmaajo iyo Kheyre Alle ha ku simo inta ay jiilka xiga dalkooda iyo qarankooda ba dhaxalsiin doonaan.
Qudunqutay kuquuso,wufuudii imaaratka oo kusoo shubnaya hargeysa caasimada shankaroonland.maxay wadaan.
1.Pasoportkii sl oo la aqonsaday,tasoo systemka imagaritionka imaratka lagu daray.
2.Xoolihii shankaroonland oo imaratku sheegen inay toos u iibsanayaan.
3.Xafiis diplumaasi oy hargeysa ka furanayaan.
4.Dhakhtar wayn oo kalyaha lagu sifaynayo oy ka furayaan sl
5.tababarka iyo qalabeynta dhamaan ciidamada shankaroonland.
5.Tababarka iyo horumarinta tayada dhanaan shaqalaha shankaroond land
Nacas salax cisbitalka dadka walan mukujira